माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिदै, ओलीलाई छट्पटी ! « Ok Janata Newsportal
माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिदै, ओलीलाई छट्पटी !
उनले भने, ‘केपी ओलीले हामीलाई एमाले भएर बस्न नदिने नै भएपछि सीमित विकल्प छन् । अविश्वास प्रस्ताव आएको भए हामीलाई अप्ठेरो पर्थ्यो । ओली आफैं विश्वासको मत लिन गएपछि फ्लोर क्रस गरेर ढाल्नुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिनु राजनीतिक निर्णय हुने देखियो ।’